जन्मसमय अनुसार यसरी थाहा हुन्छ तपाईको भाग्य !! - Nawalpur Dainik
यो पनि पढ्नुहोस् : आइतवारको दिन यि मन्त्रको उच्चारण सहित उपासना गर्नाले मिल्नेछ चमत्कारीक लाभ !!:हिन्दु धर्ममा हरेक दिनको उत्तीकै महत्व हुन्छ । हरेक दिन कुनै न कुनै देवताका विशेष दिनका रुपमा पुजाआराधना गरिन्छ । आइतवार सुर्य भगवानका लागि विशेष दिन हो ।
कसरी गर्ने सूर्य देवको उपासना ?:धार्मिक मान्यता अनुसार सूर्यलाई हरेक दिन प्रातकालमा नुहाएपछि अर्घ दिनु पर्दछ । सूर्य देवको उपासना गर्दा पवित्र जल अर्पण गर्नुपर्दछ । यसरी उपासना गर्दा सूर्य देव प्रसन्न भई आयु, आरोग्य, धनधान्य, पुत्र, मित्र, तेज, यश, विद्या, वैभव र सौभाग्यका दिने गर्दछन् । सन्ध्याकालमा पनि सूर्य देवलाई पवित्र जलको अर्घ दिन सकिन्छ ।
Prevगायिका समिक्षा अधिकारी भन्छिन नायिका बन्ने रहर छ
Nextचैत ०२ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल